Ny fanovana ny môdely mailaka ao amin'ny OSX dia mora kokoa amin'ny fametahana atiny | Martech Zone
Satria ny HTML HTML dia tsy manaja ny HTML5 sy ny CSS3 amin'ny ankapobeny, dia mitaky latabatra misy akany marobe mba hampifanaraka tsara ny zava-drehetra ary hampidirina am-pahavitrihana ny rindranasa finday. Rehefa manomboka manamboatra modely mailaka sarotra miaraka amina loharano marobe ianao, kaody voafantina ary endriny samihafa, dia mora very ao amin'ny kaodinao.
mampiasa 250okFitsapana ny famolavolana, azoko hamarinina fa ny anay mailaka mailaka nijery tsara ny mpanjifa amin'ny birao sy finday rehetra. Vao tsy ela aho no nifindra ny anay Podcast an'ny Martech ho an'ny mpampiantrano vaovao izay mitaky fanovana ny gazety. Ho fanampin'izay, nohavaoziko ny newsletter miaraka amin'ny anay whitepapers marketing. Nandritra ny nanaovako ireo fanovana ireo tamin'ny maodelin-tsika fototra, dia namboariko ilay kaody ary nanomboka nahita olana iray izay notapahana ny mailaka nosoratanay… ny ampahany aminy dia nifantoka ary ny sisa dia navela ho nohamarinina.
Tsy nahitana lafin-javatra iray lehibe ny kaonty safidy nataoko, mivalona atiny, izany dia hahafahako mamantatra mora foana hoe aiza ny olana misy ny akaniko. Ny fametahana atiny dia mandamina ny rafitrao eo amin'ny baravarankely ahafahanao manitatra sy mitsambikina mivantana amin'ilay faritra tianao hanovana. Nampiakatra tonian-dahatsoratra vitsivitsy aho nandritra ny herinandro lasa izay nitady sehatra lehibe ary tonga kafe expresso.
Vantany vao nosokafako ny mailaka tao amin'ny Espresso dia hitako ilay olana ary afaka nanitsy azy aho tao anatin'ny segondra vitsy (hadinoko ny nanidy latabatra). Azonao atao ny mahita ny fomba fiasany amin'ny pikantsary etsy ambany… ny kaody dia eo ankavia, fa ny navigator aforitra atiny eo ankavanana. Ity ny latabatra voahitsy, saingy azonao atao ny mahita ny fomba hahafahako mamantatra haingana ny olana misy akany na hierarchical miaraka amin'ny rafitry ny maodeliko mailaka!
Ny Espresso dia tsy natao hanovana mailaka fotsiny fa tonian-dahatsoratra mahery vaika ho an'ny Apple OSX miaraka amin'ireto endri-javatra manaraka ireto:
snippets - ny hitsin-dàlana dia mamela anao hanambatra sy hanitatra fanafohezana mifototra amin'ny tag sy sombiny fanao.
Toolbar Favorites - Ataovy amboary ny biraonao miaraka amin'ny hetsika, sombin-tsoratra ary menus raha te hiditra haingana.
Templates - Ho an'ny rakitra, lahatahiry na tetikasa. Mampiasà iray natsofoka tao anaty, na tahirizo ny sombiny azo ampiasaina indray. Mpandrindra fotoana tena izy.
sehatr'asa - Ankehitriny miaraka amin'ny fihoaran'ny tabilao rehefa mampifangaro bebe kokoa aza amin'ny rakitra fisie tetikasa.
Sokafy haingana - Mifamadiha eo anelanelan'ny antontan-taratasy nefa tsy esorinao ny kitondroo. Fotoana mandeha izao.
Basics fototra - Fanovana Zippy. CodeSense. Ary mbola hanohon. Torolàlana mitazona. Fampifandanjana ny fononteny. Ao daholo, manampy mangingina.
Multi Edit - Manaova fanovana maro indray mandeha, fa tsy fanovana iray imbetsaka. Safidy marobe no mahatonga ny fanovana anarana ho rivotra.
Navigator - Tsy misy menio fiasa fotsiny. Mizaha mora foana ny rafitry ny kaody miaraka amina vondrona, topi-maso mialoha ny style ary sivana haingana.
Fanohanana ny fiteny - Avy ao anaty boaty: HTML, (S) CSS, LESS, JS, CoffeeScript, PHP, Ruby, Python, Apache ary XML.
Fantastic Find - Tsy misy fanjaitra na haystack intsony. Tadiavo sy soloo ny tetik'asa, sivana haingana ary regex miloko manao fikarohana amin'ny alàlan'ny fisie na mandefa feo tsio-drivotra.
Herin'ny plug-in - Espresso dia manana plug-in be dia be API ho an'ny hetsika, syntaxes, famolavolana ary maro hafa.
Faly be aho miaraka amin'i Espresso ary efa natsipiko ho azy io ny tonian-dahatsoratry ny kaody taloha! Ny vidin'ny fitaovana dia nitahiry vola taonina tamiko tamin'ity laharana voalohany ity izay azoko mora foana ny namantatra sy nanitsy.
Sintomy ny Espresso izao
Ohatrinona ny vidin'ny famokarana horonantsary fanazavana?